Polisy nahafaty olona – Voalaza fa tao anaty haizina no nisian’ilay fifanjevoana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Polisy nahafaty olona – Voalaza fa tao anaty haizina no nisian’ilay fifanjevoana
Na tsy nety niresaka mahakasika ilay fahafatesan’olona tany Ambositra aza ny minisitry ny Fila-minana anatiny, omaly, nandritra ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety dia nilaza kosa ireo mpiara-miasa aminy fa « sarotra tamin’ ireo polisy tany Am-bositra no nanavaka ny jiolahy sy ny tompon’ny trano voata-fika satria maizina ny andro tamin’izy ireo tonga hanavotra an’ ireo tompon-trano nisy nanafika ».
Mahakasika ilay polisy indray dia fantatra fa efa mandeha izao ny famotorana any an-toerana, satria ain’olona no nafoy. Tokantrano iray no nisy nanafika ny ala-tsinainy vao maraina be tokony tamin’ny roa ora tany Ambo-sitra. Naharay antso ny polisy ka tonga tany an-toerana. Voatifitra tsy nahy tao anatin’ny fifanjevo-ana ny renim-piana-kaviana tao an-trano.
Betroka – Olon-tsotra roa maty voatifitra, dahalo roa nodoran’ny fokonolona(0)
Manova paikady ny dahalo any amin’ny faritr’i Betroka amin’izao fotoana izao. Tsy mangalatr’omby intsony izy ireo fa mandroba sy mandoro trano indray. Olon-tsotra roa no maty ary dahalo roa kosa no nodoran’ny fokonolona nandritra ny fanafihana tanàna efatra nataon’ny malaso maromaro, tany an-toerana, ny 18 mey teo tokony ho tamin’ny 1 ora maraina. Lasibatra voalohany tamin’izany ny tanànan’i Manitsy. Tsy afa-po tamin’ izany ireo dahalo ka mbola nanohy ny diany tany Tanambao. «Olona iray no voatifitra tamin’izany ary trano iray no voatafika. Vola Ar 50 000 sy kavina volamena no lasan’ireo olon-dratsy», hoy ny tatitra avy amin’ny zandarimaria any an-toerana.
Maevatanana – Kalachnikov iray sy bala 39 nentina tany anaty kitapo (0)
Olona telo nitondra basy no nifanenjehan’ny zandary tany Antanim-bary Maevatanàna ny 19 mey teo, tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. «Olona tsara sitrapo no nampandre ny zandary amin’ny fisian’ ireo olona ireo ka nidina tany an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Rehefa tonga tany an-toe-rana ireo zandary dia nifanehatra tamina lehilahy telo nitondra kitapo, teo anoloan’ny hôpitaly ao Antanimbary. Nitsoaka avy hatrany ireo olon-dratsy ka raikitra ny fifanenjehana», hoy ny tatitra voaray avy any an-toerana. Raha ny fantatra dia noho ny hamaroan’ny olona nifamezivezy no tsy nahafahan’ireo zandary niti- fitra ka afaka nitsoaka ireo olona telo nampiahiahy. «Latsaka anefa ilay sakaosy nentin’ireo olona ireo ka rehefa natao ny fisavana dia basy kalachnikov iray niaraka tamin’ ny bala 39no tao», hoy ihany ny tatitry ny mpitandro ny filaminana avy any an-toerana. Noraisina avy hatrany ny fepetra ka nosakanana avokoa ireo fiara rehetra nandalo, hitadiavana ireo olona telo ireo. H.R.
Niverin-dalana > Niverina ireo fokonolona nanara-dia omby 60 nalain’ny dahalo tany Bevoay Betroka ny 19 mey teo, tokony ho tamin’ ny 10 ora alina, rehefa tonga teo amin’ny toerana antsoina hoe Angiry. Voa-laza fa tanànan-dRemena-bila io tanàna io ka izay no nampiverina ireo mpanara-dia. Niantso heli-koptera ireo mpanara-dia saingy tsy afaka mihetsika io raha tsy amin’ny alakamisy ho avy izao. Fetin’ny Pentekosta > Lozam-pifamoivoizana fito no fantatra fa niseho teto Antananarivo sy ny manodidina nandritra iny fetin’ny Pentekosta iny, raha ny tatitra azo teo anivon’ny zandarimaria-pirenena. Teny amin’ny lalam-pirenena fahafito no nisehoan’ny dimy tamin’ ireo ka ny telo dia teto amin’ ny faritra Analamanga avokoa ary ny roa tany amin’ny faritra Vakinanka- ratra, ny iray teny amin’ny lalam-pirenena fahefatra ary ny iray teny amin’ny lalam-pirenena faha-54. Fitaovam-piadiana nafenina > Fitaovam-piadiana mahery vaika maro-maro nilevina tao anaty tany no saron’ny zandary tany Mangarano Toamasina, ny 17 mey teo. Basy AKM 2 niaraka tamin’ny bala 42, ary grenady efatra no sarona tamin’ izany. Fakàna vola an-tsoko-soko > Tafakatra 24 amin’ izao fotoana izao ireo olona voarohirohy saika haka vola tao amin’ny Banky Foibe ka voasambotry ny polisy. Misy mpiasa ao amin’ny banky ny sasany amin’ireo olona ireo. Voafaokan’ny fiara > Zandary iray miasa ao Ambohimangakely no naratra mafy nofaohin’ny fiara ny 20 mey teo, tokony ho tamin’ny 8 ora maraina. Nanosika fiara nisy fahasimbana no naha- voadona azy. Nentina avy hatrany namonjy hôpitaly izy taorian’izany. Hita faty > Lehilahy iray no hifa faty tao anaty alan- kininina tany Ambalavao-kely ,any amin’ny faritra Matsiatra Ambony, ny 18 mey teo, tokony ho tamin’ ny 1 ora tolak’andro. Niala tamin’ny tendany ny lohan’io lehilahy io tamin’ ny fotoana nahitana azy. Zava-mahadomelina > Menaka rongony 5 litatra sy rongony 2 kilao no saron’ ny zandary tany Tolagnaro, ny alahady teo. Ramatoa iray no nahatrarana ireo zava-mahadomelina ireo. Nanondro namana hafa izy tamin’izany ka olona roa no nosamborina niaraka taminy.
Faty olona, Polisy, Mpanoratra Rijakely, 17.11.2012, 09:39	FIARAHAMONINA